အလှအပ – Page3– My Doctor
How to solve Stretch Mark
DrMay ThantSyn	2019-03-04T17:58:06+00:00	March 4th, 2019|Categories: All Articles, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ, နေထိုင်မှုပုံစံ|
အကြောပြတ်ခြင်းကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလဲ? အကြောပြတ်ခြင်းကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလဲဆိုတာ မပြောခင် အကြောပြတ်ခြင်းဟာဘာလဲဆိုတာ အရင်ပြောပြပါ့မယ်။ အကြောပြတ်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ? အကြောပြတ်တယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်ကအကြောရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရေပြားရဲ့အောက်ခြေကနေပြီးမှ အရေပြားရဲ့တင်းအား(Elasticity)ကို ထောက်ပံပေးထားတဲ့ တစ်သျှူးလေးတွေ(collage and elastin)ရှိပါတယ်။၎င်းတို့ဟာ ခန္ဓာကိ်ုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ အရွယ်အစားကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့ ဆွဲဆန့်တဲ့ဒဏ်(tension)ကြောင့် ပြတ်ထွက်ပြီး ပြတ်ရာကြောင်းလေးတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကိုပဲ အကြောပြတ်တယ်ခေါ်ကြတာပါ။ပုံမှန်အားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်၊ဆယ်ကျော်သက်၊ကိုယ်အလေးချိန် အတက်အကျမြန်ခြင်း၊အဝလွန်သူတွေနဲ့ အားကစားသမား(ဥပမာ-အလေးမအားကစားသမား)တွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အခြားဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ တွေ့ရတတ်သေးလဲ? အယောင်အယမ်းကျ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဟော်မုန်း(corticosteroids)လိမ်း/သောက်/ထိုးဆေး ရေရှည်သုံးစွဲတဲ့လူတွေ၊ဟော်မုန်းဆိုင်ရာရောဂါအချို့(ဥပမာ-Cushing syndrome)လိုရောဂါမျိုးတွေ၊အချို့ မျိုးရိုးလိုက်တာတွေလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသလဲ? ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ၉၀% နီးပါး၊ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေး ၇၀% ၊ ဆယ်ကျော်သက်ယောကျာ်းလေး ၄၀% (အားကစား လိုက်စားသူအများစု) မှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလူတွေမှာ
Dry Skin and Vitamin A
DrMay ThantSyn	2019-03-04T17:52:37+00:00	March 4th, 2019|Categories: All Articles, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ, နေထိုင်မှုပုံစံ|
ခြောက်သွေ့သော အသားအရေနှင့်ဗီတာမင်အေ ဗီတာမင်အေဟာ လူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုများစွာအကျိုးပြုပြီး အရေပြားကိုလဲ ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါတယ်။ဗီတာမင်အေဓါတ် မပြည့်ဝခြင်းဟာ အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းကိုသာမက အခြားသောအရေပြားပြဿနာများကိုပါ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်အေဆိုတာ ဘာလဲ? ဗီတာမင်အေဟာ အဆီတွင်ပျော်ဝင်သော လူတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး မျက်စိအမြင်အာရုံ၊ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၊မျိုးဆက်ပွားခြင်းနှင့် အရေပြားကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ပေးပါတယ်။ ဗီတာမင်အေ ဘယ်နှစ်မျိုးရှိသလဲ? (၂)မျိုးရှိပါတယ်။ က)Retinoids(Preformed Vitamin A)-အသား၊ငါး၊ကြက်ဥနဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ခ)Carotenoids(Proformed Vitamin A) - အသီးအရွက်များ(အနီရောင်၊အဝါရောင်၊လိမ္မော်ရောင်၊အစိမ်းရောင်ရှိသော)မှာပါဝင်ပါတယ်။ အစားအစာထဲတွင်ပါဝင်သော Retioids နဲ့ Carotenoids ကို လူ့အသည်းမှ Retinol အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ ဗီတာမင်အေဓါတ်နည်းရင် အသားအရေကိုဘယ်လိုထိခိုက်စေနိုင်သလဲ? ဗီတာမင်အေဓါတ်နည်းခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကိုများစွာထိခိုက်စေပါတယ်။ ထိုထဲကမှ အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်အေဟာ အရေပြားဆဲလ်လေးတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊ထုတ်လုပ်ပေးခြင်းတို့တွင်ပါဝင်ရုံမက အရေပြားရောင်ရမ်းမှုကိုလဲသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်အေချို့တဲ့ပါက နှင်းခူ(Eczema)ကဲ့သို့သော
Dark Cycle Eyes
DrMay ThantSyn	2019-03-04T17:44:05+00:00	March 4th, 2019|Categories: All Articles, Uncategorized, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
ညအိပ်ရေးပျက်ခြင်းနှင့် မျက်ကွင်းညိုတာဆက်စပ်နေပါသလား? ''အိပ်ရေးမပျက်စေနဲ့ မင်းရဲ့ မျက်ကွင်းလေးတွေ ညိုပြီးမဲမယ်'' FM ကပျံ့လွင့်လာတဲ့ Xboxရဲ့သီချင်း ဟုတ်ပြီ။ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ အိပ်ရေးပျက်တဲ့အခါ မျက်ကွင်းလေးတွေ တကယ်ကိုပဲညိုမဲတတ်ကြပါသလား? အဖြေကတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ညိုတတ်ပါတယ်။ မဲတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလို ဖြစ်ရသလဲ? မျက်ကွင်းညိုခြင်းကို လူတိုင်းတစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါ ကြုံဖူးကြမှာပါ။မိန်းကလေးတွေဆို ပိုသိကြမှာပေါ့။သူတို့က အမြဲကိုယ့်မျက်နှာလေးကို ဂရုတစိုက်လေးနေကြတာကိုး။ အိပ်ရေးပျက်ခြင်းဟာ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ ပါးလွှာတဲ့အရေပြားအောက်ခြေက သွေးကြောလေးတွေကိုကျယ်စေလို့ သွေးစီးဆင်းမှုများပြီး မျက်လုံးတစ်ဝိုက်အသားရောင်ရင့်လာတာကြောင့် မျက်ကွင်းညိုခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိပ်ရေးပျက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းဟာ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ ကြွက်သားနဲ့တစ်သျှူးလေးတွေကို လျော့ရဲစေပြီး အရည်တွေစုလာစေတာကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေပြီး မျက်ကွင်းညိုခြင်းကိုပိုဆိုးစေပါတယ်။ အခြားဘယ်အခြေအနေတွေကရော မျက်ကွင်းညိုခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သလဲ? အိပ်ရေးပျက်ခြင်းအပြင် မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း၊နေလောင်ခြင်း၊မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ရှိသဘာဝအတိုင်းထွက်သော အရောင်ခြယ်(Pigment)များခြင်း၊ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်း၊နာတာရှည်ရောဂါတစ်မျိုးမျိုးခံစားနေရခြင်း(ဥပမာ နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါ) စသည်တို့တွင်လည်း မျက်ကွင်းညိုခြင်းကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကုသမလဲ? အိပ်ရေးပျက်လို့ဖြစ်ရတာမို့
DrMay ThantSyn	2019-03-04T17:13:12+00:00	March 4th, 2019|Categories: All Articles, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
သားသားမီးမီးခြေထောက်ပေါ်က အနာလေးတွေ နုနယ်လှတဲ့ ကလေးလေးတွေရဲ့ ခြေထောက်လေးတွေပေါ်မှာ အနာလေးတွေ၊အဖုလေးတွေ၊ယားနာလေးတွေ ဖြစ်လေ့ရှိတာကို ဖေဖေမေမေတို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ အချို့အနာလေးတွေက တစ်ရက်နှစ်ရက်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားကာ အချို့ကအတော်ကြာကြာကျန်နေတတ်တာကိုလဲ တွေ့ရမှာပါ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ ခြေထောက်တွေမှာအဖြစ်များတဲ့ အနာလေးတွေအကြောင်းထဲက နှင်းခူ(Eczema)အကြောင်းလေးကို ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှင်းခူ(Eczema)ဆိုတာ ဘာလဲ နှင်းခူဆိုတာ ကလေးတွေမှာ အရေပြားဓါတ်မတည့်၍ရောင်ရမ်းခြင်း(Atopic dermatitis or infantile dermatitis)ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရေပြားပြဿနာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်၊၊ နှင်းခူမှာ အရေပြားနီရဲခြောက်သွေ့ယားယံခြင်းမှနေပြီး အရည်ဖုလေးတွေပေါက်ပြဲပြီးတစိုစိုနဲ့အနာအထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းမှာ ဖုန်၊အစားအစာ၊အဝတ်အစား၊မှို၊ပန်းဝတ်မှုံနဲ့ တိရစ္ဆာန်တို့နှင့် ထိတွေ့မိခြင်း စသည်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလိုကလေးတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာ ပန်းနာရက်ကြပ်(သို့)ဓါတ်မတည့်တတ်တဲ့ရောဂါရှိသူတွေရှိတတ်ပြီး ဒီကလေးတွေရဲ့ထက်ဝက်ခန့်ဟာလဲ အသက်ကြီးလားတဲ့အခါ အထက်ပါရောဂါတစ်ခုခု ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ နှင်းခူဟာ ဓါတ်မတည့်ခြင်းမဟုတ်ပဲ ဓါတ်မတည့်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာတဲ့ အရေပြားပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှင်းခူကဘယ်လောက်ကြာကြာဖြစ်တတ်သလဲ? လပိုင်းလောက်နဲ့လဲပျောက်သွားတတ်ပေမယ့် အချို့ဆိုနှစ်နဲ့ချီပြီးကြာတတ်ပါတယ်။
DrMay ThantSyn	2019-03-04T17:07:03+00:00	March 4th, 2019|Categories: All Articles, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
အရေပြားကင်ဆာ ကာကွယ်ဖို့ရာ ကျန်းမာစိုပြေပြီး ရောဂါကင်းဝေးတဲ့ အသားအရည်လေးကို မိန်းကလေးတို့ပိုင်ဆိုင်လိုကြမှာပါ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ အသားအရေလေးတွေလှပပြီး အရေပြားကင်ဆာမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုတွေကာကွယ်ရမလဲဆိုတာလေးပြောပြချင်ပါတယ် အရင်ဦးဆုံးအရေပြားကင်ဆာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာပြောပြပါမယ် အရေပြားကင်ဆာမှာ ဖြစ်တဲ့ဆဲလ်တွေအပေါ်မူတည်ပြီး အဓိက(၃)မျိုးရှိပါတယ် 1)Squamous cell carcinoma(SCC) 2)Basal cell carcinoma (BCC) 3)Melanoma တို့ဖြစ်ပါတယ်။ 1)SCC က နေရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုများတာကြောက့်အဓိကဖြစ်ပွားပြီး မျက်နှာ၊လည်ပင်း၊နဲ့နားရွက်တွေမှာဖြစ်တတ်တယ် 2)BCC ကလဲအထက်ပါ SCC ကဲ့သို့ UV ray တွေအထိများတာကြောင့်ပါပဲ။ သူကတော့မျက်နှာနဲ့လည်ပင်းတွေအဖြစ်များပါတယ်။ 3)Melanoma ကိုတော့မှဲ့ကင်ဆာလို့ လူသိများကြပေမယ့် ရိုးရိုးပုံမှန်အသားအရည်ကလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။နေရောင်ခြည်မထိလဲဖြစ်တတ်ပြီး အမျိုးသားတွေမှာ မျက်နှာနဲ့ကိုယ်လုံးတွေပေါ်အဖြစ်များပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ခြေထောက်တွေမှာအဖြစ်များပါတယ်။ အခြားအဖြစ်နည်းတဲ့ အရေပြားကင်ဆာတွေလဲရှိပါသေးတယ်-Kaposi sarcoma,Merkel cell carcinoma,Sebaceous gland
Dry Skin and Winter
DrMay ThantSyn	2019-03-04T16:53:21+00:00	March 4th, 2019|Categories: All Articles, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
ဆောင်းတွင်းနှင့်အသားခြောက်ခြင်း ဆောင်းတွင်းရောက်တဲ့အခါ လူတိုင်းအနည်းနဲ့အများတော့ အသားခြောက်ခြင်းကိုခံစားရမှာပါ။ အသားအရည်လေးတွေ ခြောက်လာပြီး အက်ကွဲကြောင်းလေးတွေပေါ်လာတတ်ရုံမက သ်ိပ်ဆိုးတဲ့အခါအသားတွေနာကျင်ကွဲအက်ပြီး အရေပြားတွေပါကွာလို့ စိတ်ရောလူရောအနှောက့်အယှက် ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းကျမှ ဘာကြောင့်အသားအရေပိုခြောက်ရသလဲ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆောင်းတွင်းသည် ရာသီဥတုသာအေးနေပြီး လေထုစိုထိုင်းဆ(Humidity level)မှာ လျော့ကျသောကြောင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားတွေပါ ခြောက်သွေ့လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားပေါ်တွင်သဘာအတိုင်းရှိနေသော အဆီလေးတွေဟာ အရေပြားအစိုဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးထားပါတယ်။ဆောင်းတွင်းရဲ့ ကျဆင်းနေတဲ့ လေထုစိုစိုင်းဆကြောင့် အရေပြားပေါ်ကအဆီလေးတွေပါ ခြောက်သွေ့လာပြီး အစိုဓါတ်ကိုမထိန်းသိမ်းနိ်ုင်တော့ပဲ အသားအရေခြောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းမှာအသားခြောက်ခြင်းကို ဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်ကြမလဲ ၁။Moisturizer လိမ်းပါ။ Moisturizer တွေဟာ အသားအရည်ရဲ့အစိုဓါတ်ကိုဖြည့်တင်းပေးနိုင်လို့ အသားခြောက်ခြင်းမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ရုံမက သက်သာအောင်ပါကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ Moisturizer လိမ်းခြင်းဟာ ဆောင်းတွင်းအသားခြောက်ခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေမှာအမှန်ပါပဲ။ Moisturizer မှာ အဓိကအနေနဲ့ (၄)မျိုးရှိပါတယ်။ ၁)Ointment moisturizer-သူကတော့